UDAVID BOWIE: UPHENGULULO LWEALBHAMU YEBLACKSTAR - IINDABA
Mnyama U-David Bowie wamkela ubume bakhe njenge-no-fucks icon, ebambelela kwimirhumo yexesha elidlulileyo njenge-jazz yokuhlola kunye nee-echos zamadoda ahlukeneyo aphambene nesandi sokuwa kwakhe.
UDavid Bowie usweleke ekufeni abaninzi kodwa usenathi. Ungoyena mculo uthandwayo wokugqibela kaLazaro: Njengokuba laa mntu waseBhayibhileni wabizwa nguYesu ukuba aphume engcwabeni lakhe emva kweentsuku ezine zokungabikho kwento, uBuyie ubeke uninzi lwakhe ekuphumleni kwesiqingatha senkulungwane esidlulileyo, kodwa waphinda wavuka ngolunye uhlobo guise. Kuyamangalisa ukubukela, kodwa kuyinkohliso ngakumbi ukuhlala kuyo; kulandela ukubuya kukaLazaro, ababingeleli baceba ukumbulala, besoyika amandla ebali lakhe. Kwaye khawufane ucinge ukuba indoda engummangaliso enjalo — uvuko yinto enzima ukuyilandela.
UBuyie uyakwazi konke oku. Uya kuhlala ephendula kwimisebenzi yakhe ye-epochal yee-1970s, iminyaka elishumi apho wayeyalela imicu emininzi yenkcubeko ethandwayo kunye nokuvavanywa, xa wenza ukuba ukubuyiswa kwakhona kubonakale kulula njengokuvuka kusasa. Endaweni yokuzama ukubaleka loo minyaka, njengoko wenzayo kwii-80s kunye nee-90s, ngoku uzifaka emgodini ngendlela eyoyikisayo ehlekisayo kukhenketho olukhulu kakhulu, ulangazelelo, kunye nokuphinda ubuye ngaphandle kwengqondo.
Umculo wakhe omtsha ongasasebenziyo ubizwa ngokuba ULazaro , Kwaye kuguqula ukuthanda kuka-Bowie ii-avatars zibe ngumdlalo weqokobhe onomdla: Imveliso edityanisiweyo ibonisa umlingisi uMichael C. Hall esenza olona luvo luphambili lwendoda eyonakeleyo, enxilileyo nengafiyo kaBowie kwifilimu yobugcisa yowe-1976 Indoda eyawa emhlabeni . Ubanjiswe kwiseti elingisa indlu yokuhlala yaseManhattan, iHolo icinezela ukuya kwiifestile zakhe eziphakamileyo njengoko ecula ingoma entsha yeBowie ekwabizwa ngokuba 'nguLazaro.' 'Ngale ndlela okanye akukho ndlela, uyazi, ndiza kukhululeka,' ucula watsho, ebetha izandla zakhe kwiglasi. 'Kanye njengala bluebird.' Bowie ucula ingoma efanayo kwi Mnyama , ialbham ebambelele kwiintsalela zakudala njenge jazz yokuhlola kunye neechos zamadoda ahlukeneyo aphambene nesandi sokuwa kwakhe.
Ukulandela iminyaka yokuthula okunenkathazo, uBuyie wabuyela kwihlabathi le-pop ngo-2013 Umhala olandelayo . Umnqweno ojikeleze ukubuya kwakhe awunakoyisa imeko ye-albhamu yonke ye-stasis, nangona. Kwelinye icala, on Mnyama , wamkela inqanaba lakhe njenge-icon engafunekiyo, umntu oneminyaka engama-68 ubudala kwaye 'akukho nto ishiyekileyo,' njengoko ecula 'uLazaro.' Ialbham inezinto ezine ezenziwa ngabantu abatsha basebenzisana kraca, bekhokelwa nguDonny McCaslin, owayengumdanisi wejezi zale jazz, onerepertoire yakhe ibandakanya ukuqina okunzima kunye nokugquma kweAphex Twin. I-wingman yexesha elide ye-studio ye-studio u-Bowie u-Tony Visconti ubuyile njengo-co-producer, ezisa nokuqhubeka kunye nembali.
Kuba kakhulu Mnyama ishukumisa umbono wethu wokuba irekhodi likaDavid Bowie linokuvakala njani, ukudityaniswa kwejezi, iikhowudi, inkohlakalo, idrama, kunye nokuqhawuka akukho nto iphambili emsebenzini wakhe. Isixhobo sokuqala esifanelekileyo sikaB Bowie sasiyi-saxophone, emva kwayo yonke loo nto, nanjengoko wayeneminyaka elishumi elinesibini wajonga phezulu kumninawa wakhe omdala u-Terry Burns, owamtyhilela u-John Coltrane, u-Eric Dolphy, kunye neengcinga ze-Beat Generation. Amakhonkco adibanisa uBuyie, umntakwabo, kunye nejazz ziziva zibalulekile. Ukushisa kwahlushwa yi-schizophrenia ebomini bakhe bonke; ukhe wazama ukuzibulala ngokutsiba ngefestile yesibhedlele sabagula ngengqondo kwaye ekugqibeleni wazibulala ngokuzibeka phambi koololiwe ngo-1985.
Mhlawumbi oku kuyanceda ukucacisa ukuba kutheni u-Bowie ehlala esebenzisa i-jazz kunye ne-saxophone yakhe hayi i-pep-snapping pep kodwa endaweni yokucacisa imfihlakalo kunye nokungavumi. Kulapho ekusebenzisaneni kwakhe kufutshane nomdlali wepiyano we-avant-jazz uMike Garson, ukusukela ngo-1973 ' UAladdin Sane (1913-1938-19777?) 'yonke indlela eya ku-2003' Ndiziseleni uKumkani weDisco . ' Kukwi squawks zakhe zasendle ngo-1993 ' Tsiba Bayatsho , 'i-ode ukuya eBurns. Kodwa akukho mzekelo mkhulu weepathos ezenza iBaxie's saxophone iphefumle kunokuba ' Abangaphantsi komhlaba 'ukusukela ngo-1977 Phantsi , Elinye lawona maxesha mabi (kunye nefuthe) lamaxesha okuphuma. Ingoma leyo ityhile imeko yexesha elizayo enzima kangangokuba kunzima ukucinga ngobukho besenzo esifana neBhodi yaseCanada ngaphandle kwaso. Ukugqitywa kwesangqa, iiBhodi zaseKhanada kuthiwa yenye yezikhuthazo zikaBuyie Mnyama . Okwangoku, akunakwenzeka ukuba uBuyie abaleke, kodwa oko akuthethi ukuba akazukuzama.
Ngokomxholo, Mnyama utyhalela phambili kunye ne-nihilism ediniweyo yehlabathi ephawule umsebenzi wakhe omkhulu kule nkulungwane. 'Yinto ejikeleza intloko yenkanuko yobomi ngokuchasene nokuphela kwayo yonke into,' wacinga malunga nokukhululwa kuka-2003 Yinyani . 'Zizinto ezimbini ezivuthanayo ... ezivelisa la maxesha azive eyinyani yokwenyani.' Ezo zingqubano ziza nzima kwaye zomelele kuyo yonke i-albhamu, ii-jazz solos ezingalindelekanga kunye nezwi elinamandla elidibana namabali angapheliyo okunyanzelwa kunye nentshabalalo. Ukuqengqeleka '' Tis a Pity WayenguNongogo 'ufumana igama lakhe kumdlalo ophikisanayo wenkulungwane ye-17 apho indoda yalala nodadewabo kuphela ukuze imhlabe entliziyweni phakathi kokumanga. Ukujija kukaBuyie kubandakanya ukugoba isini ('wandibetha ngenqindi'), ukuphanga, kunye neMfazwe Yehlabathi I, kodwa umxholo uyafana — abantu baya kuhlala bethetha ulwimi lwenkohlakalo xa kukho imfuneko, nokuba nini. Bona kwakho: 'Intombazana iyandithanda,' ene-Bowie yelping kwislang esivela kuyo Umsebenzi wewotshi Ii-Ultraviolent Drys.
Nangona lo mxube wejazz, ububi, kunye nokudlala indima yomdlalo uyanxila, Mnyama Igqityiwe ngengoma yayo yeengoma ezimbini, ethi ilinganise imivumbo kunye negazi ngeenyembezi ezimbalwa ezinetyuwa. Ezi zinto zibaluleke kakhulu kwiibhola zikaDavid Bowie, ezilusizi apho avumela imaski yakhe ixhomeke ngokwaneleyo ukuze sikwazi ukubona isikhumba esingasemva kwayo. 'Iintsuku zeDola' sisivumo somphefumlo ongazolanga ongakwaziyo ukuchitha iminyaka yakhe yegolide kwindawo esemaphandleni yaseBritane nokuba ebefuna. 'Ndiyafa ukuba ndityhale umva wabo ngokuchasene neenkozo kwaye ndibakhohlise kwakhona kaninzi,' ucula, amagama aphindaphindwe njengemantra Mnyama kunye nomsebenzi omkhulu kaBuyie. Emva koko, kwincwadi ethi 'Andinakunikezela Yonke into,' waphinda wavakala njengoLazaro owayekhathazekile, ebhalwe ngumtshiso obuyayo. Oku kungafi kungcungcuthekiswa akukho gimmick: U-Bowie uza kuphila ixesha elide emva kokuba umntu eswelekile. Okwangoku, nangona kunjalo, wenza uninzi lokuvuselelwa kwakhe kwamva nje, esongeza kwintsomi ngelixa intsomi yeyakhe ukubamba.
Kutsha nje iklasi xxl 2016
Inkuthazo ye-thug 103 ye-hustlerz
Elona cwecwe lomculo lililo